KMF/Cnoe : “Aiza ho aiza ny “Raharaha R. Claudine”?” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Aiza ho aiza ny “Raharaha R. Claudine”?”
“Manoloana ny toe-java-misy mifamahofaho tato ho ato, mangingina ny raharaha izay nahabe resaka teto amin’ny firenena. Eo, ohatra, ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine” sy ny “Raharaha Antsakabary”. Tokony hatao hitan’ny olom-pirenena hatrany hoe: aiza ho aiza ny tohiny sy hiafaran’ny raharaha?”
Io ny fanehoan-kevitry ny sekretera jeneralin’ny KMF/Cnoe, Raharisoamalala Patricia, manoloana ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao. Tena voatsara sy migadra marina tokoa ve ny/ireo olona izay voatonina nahabe resaka hatramin’izay?
Ny atahorana, araka ny nambarany, ny mbola isiana sy ny anjakan’ny tsimatimanota eto amin’ny firenena. Anisan’ny mahabe sy mampitombo ombieny ombieny ny fitsaram-bahoaka amin’izao fotoana izao izay.
Koa tsy tokony hapetraka mora foana izany ny raharaha lehibe nahabe resaka toy ireny. Anisan’izany ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine” sy ny “Raharaha Antsakabary“: aiza ho aiza izany amin’izao fotoana izao? Miandry vaovao marim-pototra ny rehetra: inona no hiafaran’ny/ireo olona izay nanao fandikan-dalàna?
Takina ny fahalalahana maneho hevitra
Manoloana ny fanakantsakanana maro samihafa amin’ny fanehoan-kevitra, takin’ny firaisamonina sivily toy ny KMF/Cnoe ny hoe: asehoy fa tany demokratika i Madagasikara, manaja an’izay fahafahan’ny rehetra haneho hevitra an-kalalahana sy am-pitoniana, fa tsy ho sakantsakanana sy rahonana lava.
“Mankahery ny tolona ataon’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) izahay mba hisian’ny fahaleovantenany tanteraka amin’ny fitsarana”, hoy izy. Satria izay no hita fa fositra lehibe tsy mampandroso ny firenena: ny fitsabahan’ny fahefana mpanatanteraka amin’ireo andrimpanjakana maro samihafa.
Tokony hipetraka mazava tsara ny fisaraham-pahefana eto amin’ny firenena, ary mila omena fahaleovantena ny rafi-pitsarana.